अमृत के. भट्ट र लसता जोशीको आवाजमा रहेको फोनबाटै देउन चुम्मा युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीतको शब्द अमृता भट्टको रहेको छ भने लय सृजना अमृत के. भट्टले गरेका छन । गीतमा सन्तोष श्रेष्ठले संगीत संयोजन गरेको गीतको अमृत के. भट्टले रेकर्डिङ तथा मिक्शिङ गरेका हुन ।
सार्वजनिक गीतको भिडियोमा समिर खान र अमृता भट्टको अभिनय रहेको छ । गीतको भिडियोलाई निशान एस्.के.ले निर्देशन गरेका हुन । सुशिल डाँगीले छायांकन गरेको गीतलाई निशान एस्.के.ले सम्पादन गरेका हुन । गीतको भिडियो समिर खानको युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक छ ।